Umkhankaso kaLasizwe ufinyelela kwisigidi esisodwa samarandi | Scrolla Izindaba
Umkhankaso kaLasizwe ufinyelela kwisigidi esisodwa samarandi
Ngesonto eledlule, umgqugquzeli uLasizwe Dambuza wenza umkhankaso obizwa ngokuthi-“R10 Goes A Long Way,” ngenhloso yokufinyelela emalini eyisigidi esisodwa samarandi ukusiza abafundi ekukhokheleni izifundo zabo.
UDambuza ufinyelele enhlosweni yakhe ngemuva kwezinsuku ezinhlanu nje.
Lo mkhankaso wokuxhaswa izihlwele wenziwa njengempendulo yemibhikisho ye-#FeesMustFall eyenzeke kulo lonke elaseNingizimu Afrika emasontweni amabili edlule. Lesi sihlabani esithi-“Fake It Till You Make It” sinikele ngemali eyizi-R10,000, kanti lo mkhankaso unxenxa abantu ukuthi banikele ngeyi-R10 kulokhu.
Lo mkhankaso uqoqeke ngokushesha ngemikhiqizo emikhulu efana ne-KFC enikele ngemali eyizi-R50,000, ne-African Bank inikele ngemali eyizi-R10,000 kanye nama-laptop ayi-10. Khonamanjalo, u-Pick n Pay unikele ngemali eyizi-R10,000 okube inzuzo enkulu kuDambuza nabafundi abazohlomula ngalo mkhankaso.
UDambuza ungene ezinkundleni zokuxhumana ezwakalisa ukujabula ngokufinyelela enhlosweni, ebhala ukuthi: “SIKWENZILE JOE! Siqoqe imali eyi-R1 000 000.00 yabafundi ukuze babhalise emaNyuvesi ezinsukwini ezinhlanu !!!
“Sikwenzile impela! Ngibonga kuwowonke umuntu oye wanikela ngo-R10 kulolu hlelo. SIKWENZE NGEMPELA !! #R10GoesALWay! ”
Umzabalazo wemfundo yamahhala, kanye nokuvumela abafundi ukuthi babhalisele unyaka wezifundo, kuzokweseka inani elikhulu labafundi ekubhaliseni unyaka wezifundo kulo nyaka esikuwo wezi-2021.
Umthombo wesithombe: @Lasizwe